Upcoming | ShweHub brought to you by ShweRoom
ပိတ်နေတဲ့ Websites တွေကိုဖွင့်ပေးတဲ့ Software ။
By dingnoeizolen 3299 days ago on သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ from dingnoeizolen.blogspot.com
ကျွန်တော်အခုးရေးခြင်တာကတော့ ပိတ်နေတဲ့ Websites တွေကိုဖွင့်ပေးတဲ့ Software လေးပါ
ကျွန်တော်တိုကျောင်းမှာဆိုရင်တော့ အမြဲတန်းသုံးနေကြပါ ကျောင်းမှာဆိုရင်တော့ Social Network
တွေကိုအကုန်လုံးပိတ်တယ် ဆိုတော့ဒီ Software်ကိုအမြဲတန်းသုံးနေကြတယ် အရမ်းကိုကောင်း
ပါ ကိုယ်ကျောင်းမှာလား ပြီတော့တစ်ခြာနေရာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် Website တွေကိုပိတ်နေရင်တော့ ဒီ
By aungaung 3300 days ago on ဗဟုသုတ from innewsmyanmar.blogspot.sg
မြန်မာပြည်မှ ကမ္ဘာ့အရှားပါးဆုံးကျောက် Painite လို့အမည်ရပြီး ကမ္ဘာ့အရှားပါး ဆုံး ကျောက်မျက်ရတနာ ၁၀မျိုး စာရင်းထဲမှာ အဆင့် ၅ ဝင်တဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာ တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
People.com.cn မှ ရွေးချယ်သော အရှေ့တောင်အာရှမှ အကောင်းဆုံး ကမ်းခြေ ၁၀ခု
By marlarnyein 3207 days ago on နိုင်ငံတကာ from www.myawady.net.mm
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မွမ်ဘိုင်းမြို့မှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးသည် နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုရန် အတွက် တန်ဖိုးကြီးသော အဝတ်အထည်ကို ဝတ်ဆင်လို သဖြင့် ရွှေပန်းထိမ် တစ်ခုသို့ ရွှေဖြင့် ပြုလုပ်သော အင်္ကျီတစ်ထည် ဖန်တီးပေးရန် အပ်နှံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အမျိုးသား အတွက် ရွှေအင်္ကျီ တစ်ထည်ကို ပြုလုပ်ရန် ရွှေပန်းထိမ် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် တစ်နေ့လျှင် ၁၈ နာရီ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၁၅ ရက်ကြာ အချိန်ယူ ခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ အင်္ကျီ ၏တန်ဖိုးမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၂၂ဝဝဝ တန်ဖိုး ရှိသည်ဟု သိရသည်။
By kyawswaraung 3116 days ago on လူမှု့ဘဝ from kyanaww.blogspot.sg
သက်မဲ့ အရာတွေပေါ်တွယ်တာသွားတာနဲ့အမျှ ကိုယ့်ဘေးနားက သက်ရှိတွေကို မေ့မြောသွားတတ်ကြတာတွေ့ရတော့ စိတ်မကောင်းစရာ ။ မြို့ကြီးတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ မကြိုက်နှစ်သက်စရာခေတ်ပေါ်စရိုက်တွေကြားမှာ အထာမကျသေးတဲ့ ကျနော်ကတော့ ကျေးလက်က လူနေမှုစနစ်လေးကိုတောင် သွားပြန်သတိရမိပါရဲ့ ။ပျောက်ပျက်ခြင်းမရှိတဲ့ အရာတွေထဲမှာ မမြင်နိုင်တဲ့ သံယောဇဉ်ဆိုတာ ရှိပါသေးတယ် ။
သင်္ချာဆရာတစ်ဦး၏ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်း
Anand kumar အမည်ရ သင်္ချာဆရာ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
တွက်ချက်ခြင်းကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အထုံဝါသနာပါပြီး အတန်းပညာ အဆင့်တိုင်းမှာ သင်္ချာ အမှတ်အများဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာလည်း သင်္ချာဘာသာရပ် အထူးပြုပြီး တက်ရောက်ရာ ဘွဲ့ရအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ Anand ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ကမ္ဘာကျော် သင်္ချာ ပညာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန် ကိန်းဘရိတ်ခ်ျ တက္ကသိုလ်ကို ဆက်လျှောက်ပါတယ်။ Number Theory (Mathematical Spectrum , Mathematical Gazette) အစရှိသဖြင် ကိုယ်တိုင်ဖန် တီးပြီး လျှောက်လွှာမှာ သူ့ အရည်အချင်းကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းကြောင့် ကိန်းဘရိတ်ခ်ျတက္ကိသိုလ်မှာ တက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဈေးသက်သက်သာသာ အင်္ဂလန်ကား Jaguar XJ
Jaguar S type မစီနိုင်တဲ့သူများ ဒီကားကို ရွေးချယ်နိုင်ပါ တယ်။ ၂၀၀၃ က Jagura S type ကိုအခြေခံထား ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် XJ စီးရီးဆိုတာ Jaguar ရဲ့ အစဉ်လာကြီး တဲ့ မော်ဒယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၈ ကတည်းက စတင်လို့ ယနေ့တိုင် ဆက်လက် တည်ရှိနေတဲ့ Brand ဖြစ်ပါတယ်။
By kyawswaraung 3116 days ago on အတွေးအမြင် from madankoo.blogspot.com
By aungaung 3300 days ago on နိုင်ငံတကာ from innewsmyanmar.blogspot.sg
တရုတ်နိုင်ငံ၊ အနောက်တောင်ပိုင်း ဂန်ဇီးပြည်နယ်၊ Xiangfen မြို့ မှာ ကျင်းပတဲ့ လောင်းကစားပွဲ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ယင်း မြင်းရိုင်း တိုက်ပွဲဟာ ကောက်ရိုက်သိမ်းချိန် နှင့် တရုတ်အမျိုးသားနေ့မှာ ကျင်းပတဲ့ ရိုးရာလောင်းကစားပွဲ ဖြစ်ပြီး ယနေ့တိုင် ကျင်းပနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၃၈ ကြိမ်မြောက် ထိုင်ဝမ် နိုင်ငံတကာ အီလက်ထရောနစ်ပြပွဲ အကြို
၃၈ ကြိမ်မြောက် ထိုင်ဝမ် နိုင်ငံတကာ အီလက်ထရောနစ် ပြပွဲ အကြို သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားတွင် ကုန်ပစ္စည်းသစ်များ မိတ်ဆက်နေမှုကို ယခုကဲ့သို့ တွေ့မြင်ရသည်။
ဟောင်ကောင်တွင် သင်္ဘောနှစ်စီး တိုက် ၃၆ ဦးသေ ၁၀၀ကျော် ဒဏ်ရာရ
တောင်တရုတ်ပင်လယ် ရှိ ဟောင်ကောင် ကျွန်းစုမှ Lamma ကျွန်းအနီးတွင် သင်္ဘောနှစ်စီး တိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ယင်းတိုက်မှုတွင် သေဆုံးသူ ၃၆ ဦးအထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၁၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း သိရသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားမှုမှာ အောက်တိုဘာလ ၂ ရက် (တနင်္လာနေ့) မနက်ပိုင်း ၈ နာရီဝန်းကျင် တွင် ဖြစ်သည်။ ဟောင်ကောင် လျှပ်စစ်ကုမ္မဏီမှ ဝန်ထမ်း မိသားစုများပါဝင်သည့် အပန်းဖြေ သင်္ဘော နှင့် ပို့ဆောင်ရေး ဖယ်ရီ တို့ တိုက်မှု ဖြစ်သည်။ ကုမ္မဏီသင်္ဘောတွင် ခရီးသည် ၁၂၄ ဦးပါဝင်ပြီး ပို့ဆောင်ရေး ဖယ်ရီတွင် ဒါဇင်ကျော်ပါရှိသည်။ တိုက်မှုကြောင့် သင်္ဘောတစ်စီးမှာ လျင်မြန်စွာ နှစ်မြှုပ်ခဲ့ပြီး ကျန်တစ်စီးမှာ နာရီပိုင်းအတွင်း နစ်မြှုပ်သွားသည်။
မိဘကျေးဇူးဆပ်တဲ့ ဂဏန်းစတိုင် PSY
By aungaung 3300 days ago on ဖျော်ဖြေရေး from innewsmyanmar.blogspot.sg
Youtube မှာတင်လိုက်တဲ့ တောင်ကိုရီးယား ပေါ့ပ်အဆိုတော့ PSY ရဲ့ Gangnam Style ရုပ်သံဗီဒီယိုဟာ ကမ္ဘာကျော်သွားပြီး Apple iTune စတိုးမှာလည်း နံပါတ် ၁ Download စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာလှည့်ပြီးတောင် PSY မှ ဖျော်ဖြေပေးနေရပါတယ်။
By kyawswaraung 3116 days ago on လူမှု့ဘဝ from kyanaww.blogspot.com
အပြုမူကတော့ အရမ်းသိသာတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ အားနည်းချက်တစ်ခုပါ ။ ကျနော်က ဟန်မဆောင်တတ်ပါဘူး တစ်ချို့သော နေရာတွေမှာ ဟန်မဆောင်တတ်တာ ကောင်းပေမယ့်လည်း အသက်ကလေးရလာရင်တော့ ဒီဟန်ဆောင်ခြင်း အနုပညာကို ကောင်းကောင်းမတက်ဘူးဆိုရင်တော့ ကျနော့် ဒီဇာတ်သဘင် လောကမှာ ရှင်သန်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကိုလည်းသိပါတယ် အဲ့တာကြောင့် နောက်ပိုင်းတော့ ဗြောင်လ်ိမ် ဗြောင်စား လုပ်ရတဲ့ အခါတွေတော့လည်းရှိတာပေါ့လေ ဒါပေမယ့် အဲ့အတွက်လည်း နောင်တ သိပ်မရဖြစ်ပါဘူး ။
By kyawswaraung 3116 days ago on လူမှု့ဘဝ from maydar-wii.blogspot.com
ရိပ်သာဝင်တဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါးနဲ့ အသုံးအဆောင်တချို့လဲ မပါမဖြစ် ပါရပါသေးတယ်။ ဒါတောင် မစ္စတာဘင်း(န်) ခရီးသွားသလို အတော်လေး လျှော့ထားရတာပါ။ သွားတိုက်ဆေး တ၀က်ညှစ်ခဲ့တာတို့ ဘာတို့ပေါ့။ သွားခါနီး အလုပ်က ကလေးမလေးက တီချယ် ငါးရက်ထဲ ရိပ်သာဝင်မှာကလဲ ပစ္စည်းတွေ များလိုက်တာ ... ဆိုလို့ ပြောခဲ့ရ သေးတယ်။ ငါက ခရီးသွားသလို ဟိုတယ်မှာ တည်းမှာလဲ မဟုတ်ဘူး၊ room service လဲ မရှိဘူး၊ ပိုက်ဆံရှိတောင် ၀ယ်ချင်တိုင်း ၀ယ်လို့လဲ မရဘူး ... လို့။ စွာတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ စဉ်းစားကြည့်လေ ... ရိပ်သာမှာ ဘယ်သူ့ကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ခိုင်းလို့ရမှာလဲ၊ ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ အသုံးအဆောင် ဆေးဝါး ပစ္စည်းဆိုတာ ပိုပိုလိုလို သယ်သွား ရမှာပဲ မဟုတ်လား။
By kyawswaraung 3117 days ago on လူမှု့ဘဝ from www.chitkyiaye.com
ခုတစ်လော စုမှာ အိမ်ကဖုန်းလာတိုင်း မျက်ခုံးလှုပ်နေရသည်။ ဖုန်းတွေက ဗိုင်ဗာနှင့်လှမ်းခေါ်လို့ရနေပြီမို့ အရင်ကလောက် ဆက်သွယ်ဖို့မခက်ခဲတော့ဘဲ ရန်ကုန်နှင့်စကာင်္ပူက ပိုမိုနီးကပ်သွားသလားပင် ထင်ရသည်။ အမေ အလှူလုပ်ချင်လို့၊ အဖွား နေမကောင်းလို့၊ မိသားစု ဘုရားဖူးထွက်ချင်လို့၊ မောင်အငယ်ကောင် သင်တန်းတက်ချင်လို့၊ လည်ပင်း ငါးရိုးစူးတာကိုပင် ဆေးခန်းပြချင်ပုံနှင့် နောက်ဆုံးတော့ ငွေပို့ပေးရန်သာ သံတူကြောင်းကွဲများသုံးပြီး ပြောလာခြင်းဖြစ်သည်။ ခုလည်း ညီမအငယ်မ သူတို့မိသားစု စီးပွားရေး အဆင်မပြေဘဲ ကြွေးတင်နေတာမို့ ငွေပိုရှိလျှင် ခဏလှည့်ဆပ်ပေးထားရန် ဆက်လာခြင်းပင်။ စုက စိတ်မောပုံနှင့် ကို့ကိုကြည့်လိုက်တော့ ကိုက ထုံးစံအတို
By kyawswaraung 3116 days ago on လူမှု့ဘဝ from www.ffssyangon.org
နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ သုခကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်းမှ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိရောက်စွာ ကူညီနိုင်ရန်အတွက် Air KBZ လေကြောင်းလိုင်း မိသားစုနှင့် ခရီးသွား ပြည်သူများတို့၏ လေယာဉ်လက်မှတ် တစ်စောင်လျှင် (၇ဝဝ) ကျပ်နှုန်းအား လူမှုရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ရန်ပုံငွေ စုဆောင်းထားရှိပြီး Air KBZ Ltd. လေကြောင်းလိုင်း ခရီးစဉ်ပျံသန်းခြင်း (၂) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်၌ လူနာတင်ယာဉ် တစ်စီးအား ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီး သုခကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်းသို့ လှူဒါန်းပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
By kyawswaraung 3116 days ago on နိုင်ငံရေး from www.ffssyangon.org
ယခုဖြစ်ပေါ်နေသော မတည်ငြိမ်မှုများနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများ ဆောင်ရွက်နေမှုများအပေါ် များစွာစိုးရိမ် ပူပန်လျှက်ရှိပါသည်။ ဤကဲ့သို့ အကြမ်းဖက် လုပ်ဆောင်မှုများအပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ရှုံ့ချပါသည်။ ထို့ကြောင့် အများပြည်သူများ သိစေရန် နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)မှ အောက်ပါသဘောထား ကြေငြာချက်အား ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ကိုးလလွယ် ဆယ်လဖွားခဲ့ရသော ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မိခင်တိုင်း၏ ရင်သွေးငယ်လေးများသည် ကမ္ဘာမြေပြင် ပေါ်သို့ရောက်ရှိပြီး (၁) နှစ်နှင့် (၃ - ၄) နှစ်အရွယ်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်၏ လှုပ်ရှားမှုတို့ကို စတင်လေ့လာ အတုယူ တတ်ကြသည်။ စကားပြောတတ်စ ကလေးများသည် အလွန်အမေးအမြန်း ထူလှသည်။ သိချင်စိတ်များသည်။ ဤသို့ ကလေးများ
တီတီတာတာ မေးခွန်းမေးကြသောအခါ လူကြီးမိဘတို့သည် စိတ်ရှည်လက်ရှည် နားလည်အောင် ဖြေကြားခြင်း မရှိဘဲ မရေမရာဖြေကြသည်။
Program do rozliczania pit 2013 download - cc.one.mn
By melvinroh 2871 days ago on စားသောက်ဖွယ် from Cc.One.mn
Na stronie epodatki.eu możesz wypełnić formularz PIT 2013 przez internet.
Wystarczy jedynie wejść tutaj, wybrać zeznanie podatkowe, które chcesz wypełnić i rozliczysz się z podatku.
By firstpay9515 2871 days ago on ပြည်တွင်း from verkko-opisto.pkky.fi